Maxaad blog u sameysaa? | Martech Zone
Maxaad blog u sameysaa?
Monday, July 31, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waxaan jeclahay inaan raadsado oo aan gudbiyo macluumaadka. Waxaan hayaa koox faro badan oo qoys, asxaab, shaqaalayaal iyo macmiil i weydiiya ra'yigayga waana jeclahay inaan iyaga siiyo. Nasiib darrose waxaan hayaa su'aalo badan iyo dad badan oo u baahan caawimaad, hase yeeshe, markaa mararka qaarkood xitaa qoyskeygu way ku waalaan inaanan ka jawaabin.
Laakiin, waa is waxa aan ku fiicanahay.
Waxaan jeclahay inaan dhageysto.
Waxaan jeclahay inaan wax akhriyo.
Waxaan jecelahay inaan wax barto.
Iyo, Waan jeclahay inaan la wadaago wixii aan bartay.
Wadaagista ayaa xitaa ka sii muhiimsan markaan qaldamo. Waan ku qanacsanahay markay dadwaynuhu ii sheegaan inaan ka ahay dhagaxayga. Maanta waxaan si xamaasad leh uga shaqeeyay shaqada oo ku saabsan xuduudaha waajibaadkayga iyo shaqadayda. Runtu waa, waxay ahayd tiff maxaa yeelay waan necbahay xuduudaha. Ma doonayo kooxdayda waxaanan ku doodayaa waxa shaqadaydu tahay iyo waxa ay shaqadoodu tahay. Kaliya waxaan runtii rabaa inaan helo koox madax ah si aan u xaliyo dhibaatada darn! Waa intaas!
Waqtiyada walaaca ee shirkad, waxaan jecelnahay inaan dib ugu riixno mas'uuliyadaha iyo xuduudaha. Sow maahan wax lagu qoslo in marka aad shirkad bilowdo in xuduudahaasi aysan jirin? Qof kastaa si fudud ayuu u laadayaa sababtoo ah dhammaantood waxay leeyihiin ilaa hadday rabaan inay badbaadaan. Sideen u ilaalin karnaa xawaarahaas markaad ka korayso 5 ilaa 10 ilaa 5,000 macaamiisha ah? Waxaan u maleynayaa inay tahay mid ka mid ah sirta qarsoon ee shirkadaha waaweyn. Si aad ula socoto hawsha, waraaqaha, farta ku fiiqaya…. kaliya lagu dhammeeyo! Taasi waa sababta aan ganacsiga ugu jiro ee aanan u ahayn siyaasad. Waan necbahay siyaasada, gaar ahaan siyaasada ganacsiga.
Markaa waan qayliyey, iyaguna way qayliyeen, aniguna waan sii qayliyey oo waan ka baxay. Ka dib, waan ka soo gudubnay. Waxaan nahay koox kafiican taas darteed. Miyaan jeclaan lahaa inaysan waligeed dhicin? Xaqiiqdii maya! Waa inay fahmaan sida aan dareemayo iyo qofka aan ahay si aan shaqada ugu qabanno si sax ah. Waxaan aad u ixtiraamaa iyaga gadaal ka riixis maahan. Haatanna waxaan ku qanacsanahay aragtidooda.
Waxaan rabaa inaan la yeesho doodahan qof walba. Waxaan ahay qof kafiican markaad adigu iisoo bandhigto. Ma dhihi doono waan saxanahay ama waad khaldantahay… midkeenba wuxuu leeyahay aragti iyo aaminsanaan u gaar ah. Waxaan uga fiicanahay koox ahaan kala duwanaanshaheena.
Waa sababta aan u blog!
Waxaan u turaa fikradahayga qofkasta oo raba inuu akhriyo. Waxaan hayaa dhowr boqol oo aqristayaal maalin kasta imikana dhowrkii maalmoodba mid baa igu tuuri doona faallo ama qoraal gaaban oo iga dhigaya inaan ka fekero waxa aan qoray. Shalay, hogaamiyaha shirkad GIS ah oo aad loo ixtiraamo ayaa u gudbiyay 2 erey oo ku saabsan soo galitaankeygii ugu dambeeyay ee Khariidadaha Google: "Nice Hirgelinta!". Waxay iga dhigtay maalinteyda!
Waa sababta aan wax u qoro.
Waxaan hayaa koox dad ah oo aamin ah oo igu hareeraysan oo aan si joogto ah uga fikiro fikradaha. Laakiin kuma filna. Waxaan rabaa inaan ka fikiro fikradahayga dadka aanan aqoon. Dadka ka baxsan wershadayda, dibedda dalkayga, ka baxsan jinsiyaddayda, iwm. Waan soo dhaweynayaa jawaabtooda! Runtii waan sameeyaa! Waan ka fiicanahay markaan is fahmayno. Ma jiraan wax naga hor istaagi kara.
Marka maxaad blog u sameysaa?
Khariidadda Google API: Raadi, Jiid oo Cusboonaysii Goobtayda
Blogging Corporate iyada oo loo marayo Musiibo (sida ay u socoto)
Agoosto 1, 2006 saacaddu markay ahayd 10:39 PM
Waxaan helay blogkan maanta waana inaan dhahaa waxaan u maleynayaa inay tahay boog aad u fiican oo leh qoraallo isku mid ah oo heer sare ah. Waxaan rajeynayaa inaan waxbadan aqriyo shaqadaada!